Yinyoni... Yindiza... Yitekisi Yomoya yaseSeoul entsha!
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » ISouth Korea Izindaba Ezintsha » Yinyoni… Yindiza… Yitekisi Yomoya yaseSeoul entsha!
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • ISouth Korea Izindaba Ezintsha • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Yinyoni… Yindiza… Yitekisi Yomoya yaseSeoul entsha!
Kwethenjwa ukuthi uhlelo olusha lwamatekisi asemoyeni luzodambisa isiminyaminya enhloko-dolobha yaseNingizimu Korea futhi luqale ukusebenza ngo-2025.
Indiza entsha yamatekisi yomoya ithathe indiza yokuhlola esikhumulweni sezindiza saseSeoul's Gimpo.
Indiza yokuhlolwa komphakathi yendiza ihlelelwe isonto elizayo esikhumulweni sezindiza sase-Seoul's Incheon.
ISouth Korea ngonyaka odlule yamemezela izinhlelo zokuthuthukisa ingqalasizinda kazwelonke ye-UAM, itshala imali eyizigidi ezingama- $ 65 kwezobuchwepheshe.
Indiza enamarotho angu-18 eklanywe inkampani yaseJalimane IVolocopter wenze indiza yokuhlola emfushane esikhumulweni sezindiza saseSeoul eGimpo ngoLwesine.
Indiza yokuhlola yabasebenzi bendiza engajwayelekile eklanyelwe ukusebenza njengetekisi yomoya maduze nje yenziwe lapho umshayeli eyiyisa emoyeni wayindiza eya phambili naphambili ngaphakathi kwephaseji lomoya elimisiwe.
Kwethenjwa ukuthi uhlelo olusha lwamatekisi asemoyeni luzodambisa isiminyaminya sezimoto phakathi INingizimu Koreainhloko-dolobha futhi izosebenza ngo-2025.
Indiza yase-urban air mobility (UAM) ihambe ibanga elingu-3km, ihlala ngaphansi kokuphakama okungamamitha angama-50 futhi ifinyelela isivinini esingu-45kph phakathi nendiza yokuhlola yemizuzu emihlanu.
Inhloso eyinhloko yokuhlolwa kwakuwukubona ukuthi lolu phiko lusebenza kahle kangakanani endaweni yesikhumulo sezindiza, lapho ukulawulwa kokuhamba kwezindiza kubalulekile ekusebenzeni okuphephile.
Imodeli enezihlalo ezimbili, esebenzisa izinjini zikagesi ukuze inikeze amandla ama-propeller angu-18 afana ne-quadcopter drone, yenza indiza yayo yokuqala ngo-2013. Ukuhlolwa komphakathi kwendiza kuhlelwe ukuthi kwenzeke ngesonto elizayo e-Incheon, engxenyeni esentshonalanga. kwe Seoul Indawo Eyinhloko.
INingizimu Korea ngonyaka odlule umemezele izinhlelo zokuthuthukisa ingqalasizinda ye-UAM kazwelonke, kutshalwe imali eyizigidi ezingama-R65 kwezobuchwepheshe. Uhulumeni uthemba ukuqhuba amatekisi ezindiza ukuze ahwebe kusukela ngo-2025, agibele abagibeli abayedwa phakathi kwe-Incheon International Airport kanye nenkaba yeSeoul ngezindleko ezingaba ngu-$93 ngohambo ngalunye - ngaphezu kwetekisi evamile evamile. Ithegi yamanani kulindeleke ukuthi yehle ngaphezu kokuphindwe kahlanu ngo-2035, lapho ama-UAM amukelwa kalula futhi alingwa ngamasistimu azenzakalelayo kunabantu.
Nokho, IVolocopter izobe ibhekene nokuncintisana kwe-UAM yasekhaya ebizwa nge-OPPAV. Umthuthukisi wayo, iKorea Aerospace Research Institute (KARI), ulungiselela ukuqhuba indiza yokuhlola eyisibonelo esiphelele ngonyaka ozayo.